Dagaal u dhaxeeyay ciidmada Galmudug iyo Koox Burcad ah oo ka dhacay Godin-labe – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay ciidmada Galmudug iyo Koox Burcad ah oo ka dhacay Godin-labe
Wararka ka imaanaya Degaanka Godin-labe ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay deegaankaasi ay kuwada dagaalameen Ciidanka Nabad Sugidda Galmudug iyo Koox Isbaaro dhigtay Degaankaasi,waxaana dagaalkaasi uu Sababay Dhimasho iyo Dhaawac.
Dagaalka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 3 qof oo hal ka mid ah uu yahay shacab.
Sidoo kale dagaalka ayaa sababay dhaawac inkastoo aan ilaa hada la heyn tirada dhaawaca ah ee dagaalkaasi ka dhashay.
Kooxaha la weeraray ayaa la sheegayaa in Isbaaro ay ku qaadayeen Degaanka Godinlabe oo u dhaxeysa Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay Saraakiisha Maamulka Galmudug oo ku aadan Dagaalkii gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Duleedka Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.